Mitrata | साहित्य संगालो २०१३
Tag Archives: Mitrata
Chiththi Le Jurai Diyeko Mitrata – Kamal Dixit
कमल दीक्षित – चिठीले जुराइदिएको मित्रता
अब अतीतबाट उफ्रेर वर्तमानमा आऊँ भने, मैले आफू आसाम पुगेको विवरण दिनुपर्नेछ। सीमा जोडिएका दार्जीलिङ पुग्नुभन्दा पनि पैले मैले आसामयात्रा गरेको हुँ (सन् १९५०) २००७ सालमा। यो कुरा ऐले किन उठाउनु पर्‍यो भने हिमाल ले पूर्वोत्तर भारतका बारेमा चासो लिएको थाहा पाएपछि मैले पनि आफूभित्र खोजिपसेँ– मेरो सम्बन्ध आसामतिर कैले जोडियो भनेर। करीब पचास वर्षको निरन्तर पत्राचार (पत्रमित्रता) यसको कडी रहेछ। गौहाटीका लीलबहादुर छेत्री र सी.बी. गुरुङ, मोतीलाल छेत्री, डिगबोईका अग्निबहादुर छेत्री, हरिभक्त कटुवाल, शिलाङका मणिसिंह थापादेखि कृष्णप्रसाद ज्ञवाली, गोपीनारायण प्रधान हुँदै नागाल्याण्डका हरिप्रसाद गोर्खाराई अनि मिजोरमको लक्ष्मी ‘मीनू’सँग सम्म भएका पत्राचारले मेरो यो चासोलाई मलजल गरेको हो। भनूँः भारतको सुदूरपूर्वी राज्य नागाल्याण्डबाट एकजना नेपाली साहित्यिक, रोहित गौतमले मलाई ४७ बुँदाको एउटा प्रश्नावली पठाए २०६२ साल (सन् २००५ सेप्टेम्बर) मा। अचम्म लाग्यो। नागाल्याण्डमा बस्ने यी तन्नेरीलाई नेपालको कमल दीक्षितमाथि त्यति चासो किन लाग्यो? म अलि दिन त्यसै बसेँ। तर गौतमजीले मलाई फोनै गरेर ताकिता गरे। अनि मैले जे–जे हुन्छ लेखेर उनको प्रश्नका उत्तर पठाएँ। पछि त्यो समग्र छापियो– गुवाहाटीबाट प्रकाशित हुने पत्रिका “हाम्रो ध्वनि” (नोभेम्बर २००५) मा।
यसरी रोहित गौतमले मात्र होइन, भारतका पूर्वी राज्यहरूमा बसोबास गर्ने निकैजना नेपालीले मलाई भन्छन्– तपाईंलाई यताहुँदो धेरैले चिन्छन्। तर त्यो ‘चिन्छन्’ भित्र देखादेख बोलचाल पर्दैन, केवल कमल दीक्षित भन्ने नामसँग परिचित छन् उनीहरू। र, त्यसको मुख्य श्रेय २०१२ सालमा छापिएको उसबेलाको गौहाटीको एउटा विद्यार्थीको किताबले पाउँछ। लीलबहादुर छेत्री भन्ने एउटा कसैले नचिनेको ‘केटा’को किताब त्यतिबेला कसैले नामसम्म नसुनेको नेपालको एउटा ‘लाइब्रेरी’ ले छापिदियो– मदन पुरस्कार पुस्तकालयले। त्यो पुस्तकालयको ‘हर्ताकर्ता’ भएको म, त्यसै चर्चित हुनपुगेँ असमतिर। त्यो चर्चा सेलाएन। ऐलेसम्म पनि त्यसको ‘डिभिडेन्ड’ खाँदैछु म। असमतिर मात्र होइन दार्जीलिङ डुवर्स भेकमा पनि कमल दीक्षित चिनिन्छ। २०२० सालतिर हो, मदन मेमोरियल गर्ल्स स्कूल (हालको मदनस्मारक मावि) की शिक्षिका कुमारी विष्णु वाइबा स्कूलको विदामा आफ्नो घर गइन्– दार्जीलिङ। फर्केर आएपछि उनले मलाई भनिन्, “दीक्षितजी, तपाईंलाई हाम्रो उतातिर धेरैले चिन्दा रहेछन्। धेरैले मलाई तपाईंबारेमा सोधे। मैले उहाँ हाम्रो स्कूलका सेक्रेटरी हुनुहुन्छ भन्दा उनीहरूले अचम्म माने इत्यादि।” पछिकी प्रख्यात् ‘पारिजात’, कुमारी विष्णु वाइबा, त्यसपछि मसँग अलि नजिकिएकी थिइन्। नत्रभने, उनका लागि म एकजना ‘स्कूल सेक्रेटरी’भन्दा बढी केही थिइनँ! यसरी म पूर्वोत्तर भारतमा चिनिनुमा मेरो आफ्नो खुबी केही थिएन भनिहालेँ, थियो भने त्यो मेरो चिठी लेख्ने कलमको देन थियो। स्कूलमा पढ्ने बेलादेखि लागेको ‘पेन फ्रेण्ड’ (पत्रमित्रता) को चस्काले मलाई पछि पनि छाडेन। मैले चिठीहरू लेख्न छाडिनँ। खास गरेर कवि लेखकहरूको ठेगाना पायो कि म चिठी लेखिहाल्थेँ। अनि आएको चिठीको पहुँच पठाइहाल्नुलाई मैले आफ्नो कर्तव्य जस्तो मानेको थिएँ। नेपालका लागि यो अलि नौलो कुरा भएछ। आफूले लेखेको चिठीको जवाफ नेपाल, अर्थात् काठमाडौँ खाल्डोबाट पाउने आश गर्दा रहेनछन्– बाहिरका नेपालीहरू। त्यसमा ‘अपवाद’ हुनपुगेछ यो क.दी.। असमबाट मैले एउटा ‘पदक’ पाएको छु। त्यतातिरका नेपालीहरूबीच पत्र आदानप्रदान अथवा कुराकानीका सिलसिलामा भनिँदोरहेछ– ‘नेपालबाट चिठीको जवाफ या पठाएका किताब/पत्रपत्रिकाको पहुँच दिने एकै जना मात्र छन्– कमल दीक्षित।’ यस्ता कुरा सुन्दा म निकै फुर्किएको छु कैयौँ पटक।
सबभन्दा पहिले म असम, त्यसबेलाको आसाम पुगेको हुँ गौहाटीमा। मेरो आमाको भाकल रहेछ, कामाक्षा भगवती मन्दिरमा र कलकत्ताबाट डेकोटा हवाईजहाज चढी हामी गौहाटीको एयरपोर्टमा ओर्लेका थियौँ– मेरा बाबा आमा र म हामी तीन जना। त्यो सन् १९५० थियो भनेर माथि नै भनिसकियो। गौहाटी त्यसबेलासम्म एउटा गाउँले बस्ती जस्तो मात्र थियो। कामाक्षा मन्दिरसम्म जाने मोटर बाटो पनि बनेको थिएन। मन्दिरको तल पहाडको फेदीबाट हिँडेरै उक्लेका थियौँ हामी। बस्ने प्रबन्ध पनि राम्रो थिएन गौहाटीमा। नाम मात्रको होटल थियो एउटा, त्यसैमा दुई रात काटेर हामी कलकत्ता फर्केका थियौँ। त्यसबेला त्यहाँ हामीले नेपाली कोही भेटेनौँ– ‘लालमोहरिया नेपाली पण्डा’ बाहेक। यसपछि म गौहाटी पुगेँ सिलगढीबाट रेल चढेर, सन् १९७० मा। यो भ्रमण रानी जगदम्बाको ‘तीर्थयात्रा’ थियो। त्यसैले यात्रा कामाख्या दर्शनमै सीमित रह्यो। तर यसपटक भने गौहाटी वरिपरिका ४०/५० जना नेपालीहरूसँग भेट भयो। मदन पुरस्कारले गर्दा रानी जगदम्बाको नाम चलिसकेको रहेछ त्यतातिर। अनि यात्रासाहित्यका लेखकका नाताले मेरा पिताजीलाई अनि, ‘बसाइँ’ का प्रकाशकका हिसाबले मलाई पनि असमहुँदो धेरैले चिनिसकेका रहेछन्। त्यही सबै हुँदा गौहाटी रेल्वे स्टेशनको माथ्लोतलाका कोठा, त्यहाँको कौसी भरी भएका थिए असमिया नेपालीहरू। त्यसबखत फोटो पनि खिच्न भ्याएको थिएँ मैले। त्यो फोटो ‘नेपाली’ त्रैमासिकको पूर्णाङ्क ४७ मा पनि छापिएको थियो मेरा पिताजी केदारमणि आ. दीक्षितको ‘कामाक्षा र दार्जीलिङ यात्रा’ भन्ने लेखमा।
Posted in News Papers Nepali	| Tagged Articles, Chiththi Le Jurai Diyeko Mitrata, Friendship, Kamal Dixit, Letter, Mitrata, News Papers Nepali	| Leaveareply